NAIKA ELIANA HITORY AN- DRAJOELINA SY LYLISON NY « AVOTA » – MyDago.com aime Madagascar
Mitombo ny fitoriana an-dry Lylison sy Rajoelina mikasika ny raharaha any Atsimo. Ankoatra ny fitoriana izay nataon’ny Ankolafy Ravalomanana dia fantatra izao fa hametraka fitoriana ihany koa ny zanak’Atsimo. Araka ny nambaran’ny Cst Naika Eliana teny amin’ny Magro Behoririka androany dia nanangana ny fikambanana antsoina hoe « Associations des Victimes de l’Operation Tandroka Atsimo » (AVOTA) izy ireo. Hitory an-dRajoelina sy Lylison izahay hoy izy satria namono ireo havanay. Tsy manaiky izahay fa ho entinay eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa ny fitoriana. Efa lasa hoy Naika Eliana any amin’ny mpiaro ny zon’olombelona izany satria izy ireo dia nilaza fa ataovy ny fandiahadiana eo anivon’ny parlemantera. Nisy ny tatitra nataon’ny ireo mpitarika ny Tandroka hoy izy ka izahay tsy mahatoky ireo. Rajoelina no nanatitra an-dry Lylison tany Atsimo izay namono olona tamin’ny fomba feno habibiana ary any amin’ny fitsarana izy manazava. Toy ny nataon’ny AV7 hoy Naika Eliana hoe anay ny aller fa azy ny retour, ka anay izao ny retour. Nanao antso ho any Croix Rouge ny tenany hoe rehefa tsy mahavita ny eto dia andefaso Croix Rouge iraisam-pirenena izahay. Olona be dia be hoy izy no novonina tany ka tsy avelany ho vita moramora izany. Na dahalo ireo olona ireo fa maninona raha samborina dia entina any amin’ny fitsarana. Raha te hamonjy ireo havana any Astimo ireo ianareo hoy izy miantso ny vahoaka teny an-toerana dia afaka miditra ao amin’ny fikambanana. Tany La Réunion izahay hoy ity olomboantendry ity nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety dia nilaza ny zavamisy any Atsimo. Nisy mpisolovava avy amin’ny oseana Indiana hoy izy hanampy ny fikambanana amin’ny fametrahana ny fitoriana an-dRajoelina sy ny forongony.
19 réflexions sur « NAIKA ELIANA HITORY AN- DRAJOELINA SY LYLISON NY « AVOTA » »
Bon courage. C’est une bonne initiative
dia vakiana fotsiny e!dia mahereza e!
et le budget 2013?Comme une lettre à la poste!qu’est ce qu’on n’a pas dit ici?et kotovelo a pris la poudre d’escampette pour eviter la fronde des pov zanakidada bernés!continuez tjrs!et les naika s’amuse à la reunion!de la poudre aux yeux pour amuser la galerie
comparer l’incomparable!telle est la nouvelle devise!pq ne pas creer un nouveau 7 fevrier 2009?ahahhhhhhhhhh;du cinema et du copier coller!
Tsy azo hodian-tsy jerena tokoa moa ny vono moka izay ataon’ireto iraky HAT any atsimo ireto ary tena tsara tokoa io andraikitra noraisina io , tsy hiandry fotsiny ny enkety parlemantera
Tsara ary dia tohizo atramin’ny farany ry Madama Naika ! Tena mety, fa izao fotsiny, tsara angamba aloha mba CONTRE X ilay fitoriana, na dia fantatra aza hoe iza no tompon’andraikitra !!
Izay mantsy no fomba fanaovan’azy !! Dia ho hita eo izay ho ataon’ireto milaza fa mazistrà mahay !
Tsy misy takona zay tsy haseho zany ehhhh, ary vao mainkka nanampy trotraka ny fanaovan-dry zalahy be galona an’iny valan-dresaka lazainy fa tatitra iny. Ny tanjondry zalahy t@iny zao dia ny hamaly fotsiny ny HMF sy ny fidradradradrana azy ao @ Magro, ny olana anefa tsy ireo irery no nahazo valinteny fa Madagasikara manontolo, sy izao tontolo izao mihitsy aza satria navoaka t@ haino aman-jerim-panjakana. Ka ny tsy nampoizindry zalahy dia taitra ihany koa ireo akaikin’izay nanana ny voa tany atsimo, taitra koa ny hafa na dia ny tany ivelany aza. Noheritreretindry zalahy fa tsy manana porofo angaha ny hafa satria hoe tany ambanivolo lavitra tany. Saingy TSY MISY MIAFINA IZAY TSY HASEHO EHHHH.
TSARA ILAY HEVITRA ,fa MANALAVIDALANA LOATRA IZANY ,efa 3,5 taona izay!
22 novembre 2012 à 3 h 59 min
Ny marina tsy maty ary tsy maintsy hijoro. Izao fitoriana izao koa dia endrikas iray eo @ tolona izay tena ilaina tokoa. Saingy fantatsika regetra fa ny Pf Zafy sy ny filoha Ravalomanana dia efa samy nametraka fitoriana avokoa fa samy tsy nisy vokany. Nanao koa ny GTT. Samy mbola tsy re daholo ny tohiny hatr@ izao. maniry tokoa raha maniry ny mba handehanan’ny fanadiadiana haingana. Sy mba ahitana ny rariny araka izay azo atao.
Aza hadinoana koa ny anjarantsika tsirairay. Samia manao izay tandrify azy ary tanojana iray no jerena dia ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana eo @ toerany sy ny fanoganana an’i rajoelina sy ny forongony.
22 novembre 2012 à 4 h 19 min
Ilaina ny tirs croisés fa tsy ny mipetra potsiny. Alefaso daholo izay mety ho tirs mankany anmi’nireo fahavalombahoaka ireo fa tsy misy maha ratsy an’izany. Raha tonga aloha ny an’ny SADC koa , arahba soa arahba tsra. Ary mba aza kiviana izay mihetsika azafady.
22 novembre 2012 à 7 h 05 min
NA FOLO TAONA AZA VAO VITA IZAO, TSY MAINTSY MAHARITRA NY MALAGASY, SATRIA MAMONO OLONA TOA MOKA IZANY TSY SITRAK’ANDRIAMANITRA KA MISEHO FOANA ANIE IZAO NY HABIBIANA ISAN-KARAZANY E ! ARY INDRINDRA TOETRA TSY MENDRIKA. MIVAVAKA HO AZY IREO ISIKA SATRIA HAMPALAHELO NY FIAFARANY RAHA TSY MIOVA. AZA MANENJIKA AZY MIHITSY SATRIA TSY IZANY NO TOKONY ATAO – FA NY RATSY AO ANATY NO TOKONY IVAVAHANA RE TOMPOKO O !
« Aza manenjika azy mihintsy satria tsy izany no tokony atao, fa ny ratsy ao anatiny no tokony ivavahana re tompoko ô » !
« Azy » iza ?
Fa inona foana foana aza ity kôzin’i Raozy toa diso dôzy ity ? MDR !!!
Ilay sefon’ireo eveka aza, efa miteny fa tsy hisy ny « réconciliation » raha tsy fantatra ary misy ny fitsaràna an’izay meloka, dia ahoana indray ?
Potika ny Firenena, ary efa tonga saina daholo ny rehetra fa mody fanina ny sasany ! Ny eglizy katôlika dia efa niova fijery, ary ireny fanambaràna nataon’ny eveka ireny baiko avy any amin’ny Vatican, fa tsy tongatonga ho azy fotsiny izao !
Alefa ny fitoriana, dia omeo kôpian’ilay izy hoy aho ny CI, indrindra fa ireo olona marobe fantatrao ireo ry Madama Naika â !!
Tsara averina eto ireto ny hoe : Déni de justice sy ny asan’ny CPI !
Ho lava raha adika fa dia mba samy mamaky tsara ao amin’ny Wikipédia na any amin’izay mety ahitàn’azy ny dikany !
Ao amin’ny Wikipédia ihany, momban’ny CPI :
« La Cour est conçue pour compléter les systèmes judiciaires nationaux ; elle ne peut exercer sa compétence que lorsque les juridictions nationales N’ONT PAS LA VOLONTE, NI LA COMPETENCE POUR JUGER DE TELS CRIMES.
L’INITIATIVE EN MATIERE D’ENQUÊTE ET DE JUGEMENT DE CES CRIMES EST DONC LAISSEE AUX ETATS » !
Ny porofo sy ny vavolombelona betsaka ; veleso ny vy dien’izy mbola menabe, ry Zanaky Menabe !
Mazava ihany koa ny Didim-pitsaràna fôpla navoakan’ny Tribonalim-poza, niampanga ny Filoha Ravalomanana ! Sady voaporofo, no tribonaly tsy mahefa !
mpanaradia dit :
manana avoka afrikanina tatsimo ny sasany,dia maka zavoka osenindiana koa nt tena!ary mba tianay ity VOT ity an!A VOT A sy VOT;tena VOT ABIA na VOT ANI no iafarany.Tena mahalitika !mba marina moa !misy olobe any larenio any be vola @io fambolena hazo any betroka io hoy ny emonaty!any ny vola no mipetraka;zany hoe olo manana zompirenena afaka mivezivezy eo izany fa tsy mila visa
Misy LEHIBEANA DAHALO ROA MPAMONO OLONA TSY MANANTSINY NITONDRA TANAMPOLO teo @ tantaran’i Madagasikara: REMENABILA izay mbola tsy voasambotra mandrak’ity ny androany, zay efa nahafaty olona tsy manantsiny aman-jatony maro, ary mbola mandositra hatramin’izao. Mitovy an’io ihany, RAVALOMANANA rehefa avy nitifitra olona efa ho 5O, lasa nadositra ihany koa. Ary mazava eto ny fampitahan’i Naika Eliane, fa aminy de hitory ny miaramila sy ny fitondrana izy, satria namono dahalo, tahaka ny AV7 nitory an-Drainivoanjo, namono mpitolona tsy manantsiny.
Mazava izao, ary mitombina, fa ao ambadik’io asan-dahalo ianareo sy ny dadanareo, izay sahy miaro hitam-poko hitam-pirenena araka izao fanambaranareo izao.
Tsy tongatonga ho azy izao, fifamonoana eo @ dahalo sy ny miaramila izao, fa ny dahalo no nitifitra sy nahafaty miaramila 12 voalohany. T@ireny aza, de vao maika ianareo teto, nandatsa ireny maherifo lava teo am-pamitana ny adidiny ireny.
Ny zava-misy, hatramin’ireo fitondrana nifandimby teto Madagasikara, de saika afa-maina rehefa nampandalovina teo @ fitsarana ireny lehibeana Dahalo ireny. Ary raha tsy hiresaka afa-tsy REMENABILA fotsiny, de azo antoka rangahy io raha ny tantarany @ maha dahalo azy, fa efa nandalo ny ftondran-dRATSIRAKA, RAVALOMANANA, RAJOELINA, kanefa afaka hatrany rehefa avy nanao kolikoly t@ fitsarana. Ankehitriny, mandray ny andraikiny ny fitondrana, satria, efa tsy miseho dahalo intsony izy ireo, fa toa milisy terroristes, vatsian-dRavalomanana vola sy fitaovam-piadina, izay miara-miataky tanàna, izay vatandahy aman-jatony maro, mirongo fiadiana mahery vaika, mamono olona ary mangalatra omby @rivony, izay tsy miraharaha sy manitsakitsaka zon’olombelona. Ry naika sy ny zanakidada eto, de mbola sahy miaro ireto dahalo ireto, sy miandany aminy, ary tena mampalahelo sy mampanongo tena, raha vehivavy lehibe manana ny mahaizy azy io, no sahy miteny toy izao. Mba nasian’ny AMNESTY INTERNATIONAL resaka ve ny olona matin’ireny dahalo ireny, sy ireo miaramila lavo teo ampamitana ny adidiny? Mba voaresaka ve ireo fananan’olona norobain’ireo dahalo ireo?
Mazava be ny tianareo hatao ry zanakidada a! zaranareo aza, tsy mampandry tany any Atsimo any ny miaramila, hisy KO @ asan-dahalo any, handotoana ny fitondrana, satria ny dadanareo foana woa, no atidoha mikotroka sy mamatsy vola an’izany. Raha tena mijery tsy miangatra ianareo, tokony samy helohinareo ny asan-dahalo sy ny mety bavures ataoan’ny miaramila fa tsy ny dahalo maty indray ity no mahalatsadranomaso anareo, kanefa ny tsy manantsiny vonoin’ny dahalo tsy raharahianareo. Ary zahay, de tsy resy lahatra mihitsy, woe, miaramila hitifitra olona tsy manantsiny izany, fa tahaka ny dahalo tsy mitsitsy ny adve manoloana azy, de mazava be koa tsy mitsitsy azy ny miaramila. De tahaka an-dRanavalona sy ny LAVARAOBY mivavaka mba hiverenan’ilay mpamono olona, de hitory ndray hono ny mpiaro ny dahalo. De hoy zahay woe, midona @ tafo fotsiny, ary inona zay taratasy fitoriana tsy natao izay, na teto an-toerana na tany ivelany. Ny gisalahy omanketsa indray no avo vava, ary ny mpiaro ny ratsy indray no midingin-drambo. De arovy foana ny ratsy, ary ataovy faoana ny fanahin’ny devolinareo, fa Andriamanitra de tsy hiaro sy tsy hiray tsikombakomba velively @ asa ratsinareo, ary mbola manafay sy mikapoka ny mpamono olona tsy manantsiny toa an-dRainivoanjo.
ra stratégie dit :
tena mampalahelo mafy reto zanaky dada,mitady stratégie betsaka ndry zareo fa tsy misy tafavoaka na iray aza,nalefa ny mpiasa mpanjakana sy ny mpiantra anao greve,nalefa ny insécurité teto andrenivohitra mbola tsy tafavoaka ihany,nalefa nandeha tao ambohijatovo sy 13 mai ny vahoaka magro sy ny protestant sasany mbola tsy tafavoaka ihany,nahazo initation daolo ny protestant intsena any dada tao ivato mba porofona hoe tiana vahoaka dada ,mbola tsy tafavoaka ihany, nalefa indray ny dahalo anao insécurité ny any atsimo,mbola tsy tafavoaka ihany,tena very strastégie marina ny zanaky dada dia andeha hitory hono fa tena mafy be tgv ah ah ah ah mdr.Tena betsaka loatra zany stratégie nareo zany mba hiverenany dadanareo ho latsaka president indray.
Ka tsy bogor indray ve ty miova anarana ty zao?mba vakionareo sy aza hodiana fanina alo ireoaveu sy révélations nataon ‘iLt Cnel charles ,sy izay mbola hataony,fa efa mivoaka daholo ny profo fa tsisy nidiran ny PRM Ravalomanana ny tuerie nataonareo foza t@07fevrier ireny a!Ny ministry ny fitsaram pozanareo efa mivilana io ny tarehiny anga heverinareo fa ho eo mandrakizay?DIA TADIDIO TSARA fa na tsy dia miteny aza ny olona izao,ils n’en pensent pas moins,fantatry ny olona daholo ny misy anareo foza nambotry sy
nampahantra ny malagasy io,na aiza na aiza.Tsy hitako izay mampivovo anareo otran’io tsy mbola nareo akory no toriana fa ny mpamono olona any atsimo.
raborigaby dit :
izaho ihany ty fa mba misarontava kely ry akama:mila 800 milio ariary izahay fefekaemo hivoriana :ndana mankany afrika tsimo e!ny vola ariary misy fa ny dolara tsy mivoaka!aza be tetika ry ffkaemo!aleo zahay ijanona pokalipsy ihany!tsy maitsy mametraka kely dadanay fa mahasoa azy io ffkaemo io an!hatavy ndray dadapasy sy ny hmf;akaiky ny faran,ny taona
27 novembre 2012 à 0 h 39 min
Ry zanaky Dada an efa mba ampy kosa angamba zay dia aza malahelo voalavo maty fa ny any an-tsaha aza mbola hiakatra, mba ny rélève @ zay rangahy karakaraina hisolo an’i Dada an sa ve tsy misy olo-manga mahavita azy ao aminareo ao, fa hiantehatra @ olona efa tsy ho tafavoaka intsony, fotoana fanomanana ny hasolo azy zao ary raha manana ambo-po nareo dia ts tokony ny hiverenany ny eto ny mahamaika fa ny ahitana leader afaka ny hihaona tsara @ zay candidat hilatsaka eo, atambaro ny herinareo dia manomana olona f’aza reraka ny mandany lera ao @ magro fotsiny, dia farany aza mba manankiana fahatany koa fa tsy niaina tany @ faritra nidiran’ireo dahalo io olona voalaza fa miaro ny any atsimo io, tsy mahalala ny zava-misy marina sa matahotra fa sao dia hivoaka ny marina après ny fahazoana an’i Remenabila izay hinoako fa tsy ho ela intsony,
tohizo hatrany ny ratsinareo fa ny tody mbola ho ela ve no tsy hanaovan-dratsy e!tsarovy anefa fa tsy mbola nisy niala maina teto ny mpandatsa-dran’ny malagasy,gasy anie reo e!ary gasy koa ianareo mitifitra sy tsy manana antra ireo,fa ho tanora foana manko a!ary ho be vola sy fahefana foana koa???androany anao ny hery fa amaray an’ny hafa ka miomana e!
Précédent Article précédent : (Amnesty International )Madagascar : Il faut mettre fin aux massacres et enquêter sur les forces de sécurité
Suivant Article suivant : RAVELONANOSY MAMITIANA TSY MAINTSY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NO HAMAHA NY KRIZY